China YL Ultra Heavy Duty Pump Mugadziri uye Mutengesi | Winclan
Slurry Pump furemu Plate-032
Chimiro Chakavhara Plate
YL Ultra Inorema Duty Pump
Saizi renji (kubuda)
2 ”kusvika 4”
50 mm kusvika 150 mm
kusvika 1 000 gpm
kusvika 250 m3 / hr
kusvika ku150 ft
kusvika 46 m
• Kubereka gungano - rakakura dhayamita shaft rine mupfupi overhang rinoderedza kutsauka uye rinopa kune hurefu hunotakura hupenyu. Anongoita mana kuburikidza nemabhaudhi anodikanwa kuti abate iyo katuriji mhando yekugara mufuremu.
• Liners - liners dzinotsiviwa zviri nyore zvakasungwa, zvisina kunamirwa, kune iyo casing yeyechokwadi yekubatanidza uye kumabvazuva kwekuchengetedza. Yakaomarara simbi liners inochinjika zvachose nehurema hwakaumbwa elastomer. Elastomer chisimbiso zvindori kumashure ese liner majoini.
Casing - Casing halves ye cast kana ductile iron ine yekunze inosimbisa mbabvu inopa yakakwira yekumanikidza yekumanikidza kugona uye imwe yekuwedzera chiyero chekuchengetedza.
• Impeller - kumberi nekumashure machira ane pombi kunze kwevanes idzo dzinodzora kudzokorodza uye nekuvhara hutachiona. Yakaomeswa simbi uye yakaumbwa elastomer impellers anonyatso kuchinjika. Kanda mumidziyo inopinza haidi kuiswa kana nzungu. Kubudirira kwepamusoro uye kumusoro misoro dhizaini zviripo.
• Throatbush - kupfeka kwakadzikiswa uye kugadzirisa kwakareruka nekushandiswa kwematepi ekumisidzana kumeso kubvumira kuenderana kwakaringana panguva yegungano nekubvisa nyore.
• Imwe-chidimbu furemu - yakasimba kwazvo imwe-chidimbu furemu inovhara iyo cartridge mhando inotakura uye shaft gungano. Iyo yekunze impeller yekugadzirisa mashandiro inopihwa pazasi peiyo inotakura dzimba yekureruka kugadziridzwa kwemanzwiro clearance.
Isu tinonakidzwa nesimba rakasimba rezvetekinoroji, zvishongedzo zvakanaka uye zviridzwa zvekuongorora zvakakwana, saka tinogona kukupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wemakwikwi.
Nezvedu/ Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika.
Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa mumusika wepombi wepasi rose. Isu tiri vagadziri vanoremekedzwa uye vanotengesa inorema basa pombi mhinduro kumigodhi, zvicherwa kugadzira, maindasitiri uye zvekurima zvikamu.Winclan Pump yakagadzira huwandu hwakawanda hwemapombi emhando yepamusoro uye mumashure-emusika pombi zvigadzirwa, izvo zvinopihwa pamakwikwi emitengo uye neasingaenzaniswi Kubva kuShijiazhuang, China, Winclan Pump yakaenderera mberi ichiwedzera 'tsoka yepasi rose, ichifarira kubudirira munzvimbo dzakaita seCanada, United State, Russia, South Africa, Australia, Zambia neChile.
Pashure: Fekitori Yekutengesa Rubber Vertical Pump - AHF Froth Pump - Winclan
Zvadaro: Slurry Pump Cover ndiro-013
Lantern Mhete-118 P50
GPS yakamira sump pombi
Stuffing Bhokisi Chisimbiso-122-R26
Voltage Kavhara Seal-124